भक्तपुरकी १ गर्भवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि - Everest Dainik - News from Nepal
भक्तपुरः मंगलबार कोरोना भाइरस पुष्टि भएकी भक्तपुरकी महिला गर्भवती भएको खुलेको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-३ झौखेल निवासी ३० वर्षीया गर्भवतीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको हो।
चिकित्सकले दिएको समयअनुसार बच्चा पाउने दिन नजिकिएपछि अप्रेसनको तयारी गर्न गरिएको कोरोना भाइरस परीक्षणमा पोजिटिभ आएको भक्तपुर अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. सुमित्रा गौतमले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार ती महिलाको चाँगुनारायण नपा २ दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालमा अप्रेसन हुने तयारी थियो । अप्रेसन गर्नुअघि कोरोना परीक्षण गर्ने क्रममा उनमा संक्रमण देखिएको मेसु डा. गौतमले बताइन् ।
संक्रमित महिलाको घरपरिवारमा सासूससुरा, श्रीमानसँगै र एक छोरा रहेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानले संक्रमित गर्भवतीको घरपरिवार र उनको सम्पर्कमा आएकाहरुकाको पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) गर्ने कार्य अघि बढाइएको बताए।
मंगलबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकी ३० वर्षीया गर्भवती महिला भक्तपुरकी पाँचौं संक्रमित हुन्। कोरोना संक्रमण भएका भक्तपुरकै स्थानीयमा भने यी गर्भवती महिला तेस्रो हुन् ।